Tandremo diso fihevitra - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Tandremo diso fihevitra
Tsy misy adihevitra fa kabary politika sy fanairana ny sain’ ny rehetra sahady, amin’ny firosoany amin’ny filatsahan-kofidiana filoham-pirenena, no nataon’ny Filohan’ny tete- zamita, teny Iavoloha, ny alarobia teo. Tsy misy mahalala izay tena any am-pony tsy miloaka aloha, fa aleo ny tantara no hitsara.
Tsy adala anefa ny vahoaka malagasy ka tsy hahalala ny vary sy ny tsiparifary, na ny setroka sy ny tomany. Prao- pagandy mipoapoaka no nameno an’Iavoloha sy ny fahitalavi-pirenena, tamin’iny fotoana iny.
Tsy misy maharatsy izany akory satria tsy lainga fa asa fanasoavam-bahoaka ihany ny fahavitan’ireny kazarana fotodrafitrasa samihafa ireny. Ho an’ny valalabemandry, dia zarany aza ho fampielezan-kevitra toy izao foana no ataon’ireo mpanao politika mandavan-taona, sitrany hahay mba hanamaivana azy amin’ny hasarotry ny fiai-nana: vita ny lalana, mitsangana ny hopitaly, mijoro ny atsy, tokanana ny aroa, misy ny vary mora sy ny zaraim-potsiny, mety hitombo koa aza ny karama! Inona indray moa no tadiavina ankoatra izay fa dia maromaroa ny tahaka izany!
Tandremo anefa fa fitaka ny kobaka am-bava sy ny kabary tsara lahatra! Tsy misy tsy vitan’ny vava tokoa ny an’ny mpanao politika, fa ny fanatanterahana aotra! Tsarovy fa matoa izy izay manatanteraka, dia azony antoka fa haharitra ela eo amin’ny fanjakany sy ny fahefany. Tsy toe-tsain’ny Malagasy mantsy izany hoe hitatatra ho an-dRainilezafy ary ny hitsikitsika tsy mandihy foana…
Na izany aza, tadidio fa ny vahoaka no tena tompom-pahefana, ka rehefa mamadika ny dina nifaovana, tsy maintsy haronjony, na ho ela na ho haingana. Ka ny fahendrena dia aleo halan’Andriana, toy izay halam-bahoaka! Ny ataon’ireo mpanao politika ihany mantsy no tsy maintsy haverina aminy, any aoriana any. Noho izany raha mpitondra naka ny fahefana teny an-dalambe no manararaotra sy mamadika izany ho amin’ny tombontsoany manokana, dia tsy maintsy ny vahoaka ihany no handrodana azy amin’ny fanjakany ary dia miafara amin’ny sesitany. Ny atsy Afrika aza, manefa hatramin’ ny aina, koa tandremo ihany sao diso fihevitra!
Famoriana olona kitoatoa no niseho teny Ankorondrano, omaly. Tsy nisy fangatahana alalana mazava tamin’ny Prefektiora, fa dia famoriam-bahoaka amboletra. Ny tena manahiran-tsaina sy manala baràka dia ny fahitana sora-baventy manevateva olona sy ny anarany. Marina fa mety misy tokoa ny alahelon’ny olona vokatry ny ataon’ireo olona mpitsabatsabaka amin’ny tsy tokony hidirany saingy efa mamoehatra kosa
Henri Roger Ranaivoson – «Samy hafa i Marc Ravalomanana sy ny vadiny»(0)
Miezaka miaro mafy ny firotsahan’i Lalao Ravalomanana Rakotonirainy ireo mpomba azy ankehitriny. Naneho hevitra ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra ambony tetezamita (Cst) avy amin’ity firehana ity, Ranaivoson Henri Roger, omaly teny Anosikely fa «samy hafa tanteraka ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy ny vadiny». «Olon-tsotra i Lalao Ravalomanana. Tsy manana fanamelohana any amin’ny fitsarana
Teriterin’ny iraisam-pirenena – Tsy hiala Rajoelina, mety hihemotra indray ny datim-pifidianana(0)
Raha zohina dia tsy hametra-pialana eo amin’ny toerany ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina raha tsy efa milamina sy mazava tanteraka ny fitsipi-dalao sy ny fepetra rehetra ahafahana miroso amin’ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony hotanterahana ny 24 jolay izao. Nahariharin’ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona rahateo ny «fanahiany ny mety tsy hahatanterahan’io fifidianana io ».
Praiminisitra Omer Beriziky – Nanameloka ireo faniratsirana amin’ny sora-baventy(0)
Nampiaka-peo ny Praiminisitra Omer Beriziky, omaly hariva, teny Mahazoarivo. Nanameloka ireo olona nitondra sora-baventy tamina hetsika famoriam-bahoaka iray, teny Ankorondrano ny tenany. Nofaritan’ny lehiben’ny governemanta ho faniratsirana, fihantsiana ary fanalàm-baraka mihitsy ireo sora-baventy ireo. Nahazo fampitandremana tamin’ity farany ihany koa ireo nanao sonia ny tondrozotra milaza fa hanala ary hanatitra ny solon’ireo minisitra avy amin’izy
Terabary, Mpanoratra Rijakely, 11.01.2013, 18:27	FIARAHAMONINA